isakhiwo eliphezulu liphumele namuhla ingenye ezichumayo ukwakhiwa. Lokhu kungenxa ngokuyinhloko yokuthi lobu buchwepheshe uyakwazi ukunikeza kumsebenzisi wokugcina ezingeni lelisetulu izinga futhi ukuqinisekisa ubude bokuphila isakhiwo. Nokho, lokhu kungenzeka kube nomthelela izindleko ukwakhiwa, kodwa naphezu intengo, amakhasimende ngokuya ephendukela ngokunembile lolu hlobo ukwakhiwa, kusukela le ndlela ingaphezu ufaneleke zonke ukutshalwa kwezimali.
Nge ukwakhiwa kwalesi sakhiwo, omunye izigaba ebaluleke kakhulu Ukuqinisa kokuncishiswa we dwala armirovochnoy steel ekhethekile. Kusukela ikhwalithi metal uqobo kanye nokuqiniswa sokunene siyobathola ngqo anqande UKUQINA eziphathekako isithunzi sayo ekotishi noma isakhiwo multi-storey. Ukukhuluma ngokuqondile mayelana slabs Monolithic, kanjani ukukhiqiza ukuqinisa yalo? Kuyaphawuleka ukuthi ukhetho engcono kungaba ukulandela imithetho kanye ukuhambisana ngokugcwele nephrojekthi zobunjiniyela. Le phrojekthi usinika izinzuzo ezilandelayo:
slabs Monolithic, wenza amaphrojekthi ubunjiniyela ngeke ncamashi ukufanisa edingekayo umthamo umthwalo aphethe;
iphrojekthi ezedlulayo kuhlanganisa eziningi ama-valve kanye nohlobo, kanye okudingekayo ekilasini ukhonkolo, ukusetshenziswa kwalo ukwenziwa zonke ukugqagqana. Konke lokhu ngeke kakhulu imali futhi musa ukuthenga izinto ezingaphezu kuka udinga;
Ukuze ngempumelelo uhlelo lwakho ikamelo, Luphinde ewusizo Cela sokuthuthukiswa iprojekhthi afanelekayo service izisebenzi. Bazokwazi ngokunembile ukubala kanye nama-practical ukugqagqana Monolithic ngendlela yokuthi esikhundleni izindonga izithelo, uma isidingo ukusebenzisa ezinye amakholomu eziveza - kuyoba kakhulu ukwandisa isikhala egumbini.
Ngaphezu kwalokho, lo msebenzi inikeza uhlu olunzulu futhi kunembile ngayo yonke imisebenzi ukuze kwenziwe i-ukufakwa slabs Monolithic, kanye izilinganiso inani eligcwele kwezimpahla, izindleko ingqikithi iphrojekthi. Lokhu kuyoba kakhulu futhi kuzuzise elula, ikakhulukazi uma isicelo ukuze yangasese amaqembu.
Uma ubamba lesi sibalo bese uqedela iphrojekthi ukukhweza, inqubo ukwakhiwa setshe Monolithic kuzothatha isikhathi esiningi esingaphansi uma kufanele enta taba baziqambela ngokwabo indlela yokukwenza. Noma kunjalo, "Gag" kulokhu kuyingozi ngempela. Nokho, hhayi wonke umuntu angakwazi ukukhokhela uchwepheshe okunjalo futhi kufanele namanje ukwenza konke ngokwami. Ngakho-ke ngaphambi kokuba ezihambayo ku ukuxoxa kungasiphi isisekelo wenziwa entabeni a Monolithic setshe, kumele wathi lona kakhulu nzima futhi kukhathaza inqubo - edinga eziningi ezahlukene amakhono. Uma ngisho ngakho unquma kulokho esizoba esakhe ukuhlomisa setshe Monolithic futhi ukubala inani izinto ezidingekayo, kancane wena izokwethulwa izinto ezimbalwa odinga ukukwazi.
Ngaphambi kokuqala miscalculation ukuqinisa ukuthi sidinga ukuba liqondwe njengoba kuhlelwe ophahleni. Into esemqoka - ukuthi steel yokugcizelela sibekwa imigqa emibili noma emithathu, kuncike ukushuba kokuncishiswa ngekusasa (ngokuvamile imigqa emibili). A valve esemqoka yalolu design yandisa steel nge ububanzi 1 isentimitha ekilasini A500-C. Isendlalelo yasenhla nemithombo yasenzansi zabiwa komunye nomunye at ibanga-20 amasentimitha ngaphandle. Ngaphezu kwalokho, uhlaka kumele ubambe imithwalo esindayo, lokhu kufanele kwenze ukukhululwa ukuqinisa kutakhiwo - kwi akhiwe kungaba anele 15-futhi ubone inkinga, kodwa ngenxa ethambile Foam block kudingeka 20 - 25 amasentimitha yokumkhulula. Ngaphezu kwalokho, kufanele bacinisekise kutsi leyo main ukuqinisa steel kwaba 2,5 kusukela ugongolo mpo. Awu - kwesigamu kunjalo senziwa, siye kubalwa ngokwengqondo futhi wafika esiphethweni lokho futhi indlela esiyidinga ngayo ukuqinisa. Ngemva sakwenza uzimele ezimbili ovundlile, inguquko bushelelezi kuya lwemidlalo Isikhala thwi yonkana ukugqagqana. Nge ubude 6 amamitha span, ipuleti ukujiya kufanele kube kufika ku-20-cm, kanye nebanga phakathi izingqimba ezimbili ukuqinisa kufanele kube 12 amasentimitha. Ukuqonda izimiso sokulungiselela bese kubekwa of ophahleni Monolithic zingenziwa impahla ukubala edingekayo ngokunembile kakhulu.